Home Wararka Amiirka Qatar oo ku cadaadinaya Farmaajo in uu is casilo
[XOG] Amiirka Qatar oo ku cadaadinaya Farmaajo in uu is casilo
Waxaa sii kordhaya dadaalka iyo galaangalka ay dowladda Qatar ugu jirto arrimaha Soomaaliya, kadib markii ay ergey gaara usoo dirtay Soomaaliya, kaasoo kulamo kala gaara la yeelanaya dhinacyada Soomaalida.
Dowladda Qatar oo gacansaar la lahayd dowladii Farmaajo ayaa dhowaan bedeshay siyaasadeeda Soomaaliya, waxaana arrinta Soomaaliya loo celiyey Wasaaradda Arrinaha dibadda, iyadoo markii hore ahayd mid ay si gaara u maamulaan Amiiro hoostaga Xafiiska looga taliyo dalkaasi, waxaana meesha ka baxaya kaalintii xiriirinta ee dalkaasi u soo mari jiray Fahad Yaasiin (Agaasimaha NISA), marka ay timaado xaaladda Soomaaliya.
Ergeyga dowladda Qatar eik laba maalmood ku suganaa Muqdisho Dr. Mutlaq bin Majid Al-Qahtani ayaa Warqad qoraal ah oo uu ka siday Amiirka Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani u gudbiyey Madaxweynaha xilkiisu dhammaaday ee Maxamed Cabdalla Farmaajo, waxaana isla xalay uu Farmaajo telefoon u diray Amiirka Qatar oo ay ka wadahadleen isbadalada siyaasadeed ee ka socda Soomaaliya iyo muhiimada ay leedahay in la gaaro dib u heshiisiin qaran si loo gaaro xasilooni ka dhalata dalka.
Wararka soo baxaya ayaa sheegaya in dowladda Qatar uu qorshaheeda hadda ka mid yahay inay Maxamed Farmaajo ku cadaadineyso inuu banneeyo xilka, isla markaana aanu is sharxin doorshada soo socota si xal kama denbeys ah loogu helo is mari waagga ka taagan Doorashada Soomaaliya.
Arrintan oo aan la ogeyn inay shaqeyn doonto ayaa wararka la helayo sheegeen in qorshaha cusub ee dowladda Qatar uu yimid markii uu cadaadis saaray Mareykanka, isla markaana ay xaqiiqsatay inay soo dhammaaday rajadii dib u soo laabashada Farmaajo.
Culumada Puntland oo Jawaab adag ka bixisay eedayn kaga timid hogaanka Puntland
Oradyahankii ugu horeeyay ee Somali-American ah oo lagu daray xulka dalka Maraykanka
Dembiile sida Farmajo oo kale ah Markale Mana Hogaamin karaa?
“Shoot to kill” orders issued in Kenya as US troops arrived for Al-Shabaab war
Cabdifatax Ibrahim (Ronaldo) - June 22, 2021
Young people engaging, aiding, or otherwise sympathizing with Al-Shabaab militants in Kenya will be killed on spot by security forces, a top administrator has...
Somalia swaps fish for Ethiopia’s Khat following the a trade deal
After days of speculation, it's now official that Somalia will be receiving Khat from Ethiopia in exchange for fish, following the latest agreement signed...
Returning is not a solution for Dadaab camp refugees in Kenya
Closing the Dadaab refugee camps, in northern Kenya, and pushing people to return to their home countries will lead to a far worse humanitarian...
Somalia, Congo, Afghanistan and Syria top the list of the most dangerous conflict zones for children, the United Nations said Monday, accounting for nearly...
Minors Teen Girls Accuse Guards At Libya Detention Centre Of Sexual Assault
Cabdifatax Ibrahim (Ronaldo) - June 21, 2021
A group of young Somali migrant girls housed in a government-run detention center in Libya have accused the guards at the facility of sexual...
Culumada Puntland oo Jawaab adag ka bixisay eedayn kaga timid hogaanka...
Oradyahankii ugu horeeyay ee Somali-American ah oo lagu daray xulka dalka...